Barsiisotni Digirii Duraa Baratan Ammalee Carraan Dalagaa Mootummaa Argachuu Dhiphaadha Jedhuun Komii Hamaa Kaasaa Jiran « QEERROO
June 27, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Waxabajjii 26,2017/ Biyya Oromiyaa keessatti carraan dalaga mootummaa baratanii argachuu waggoota muraasaa asitti akka malee dhabamaa dhufee jira.
Rakkoo kanaan barataan mooraa Yuunibarsiitiirraa baratee bahee akka araadaaf jireenya abdii kutachiisaa jiraati godhamaa dhufuun waan amaleeffatamaa dhufedha. Rakkoowwaan kana cinatti barataan Oromoo marti akka dalagaa uummataaf bakka hinlaanneef wantoota inni ittiin qabamee of dagatus baadiyyaa hanga magaalaatti taphoota kumaaraan bakka mara qabsiisanii keessattuu tapha Puuliif Teenesii, Mana qamaatii Jimaaf araada akka jimaan akka qabamuuf saaxiluutti bobbaa’amee jira. Oromiyaa bakkeewwaan maratti, Oolmaa dargaggoo jechuun wantoota akka DSTV , Puulii, Teenesii, Qaranbulaa, fii
wantoota dargaggoon ittiin of dagatu oomishaataa jiran. Olmaawwan
akkasii keesssattuu baadiyyaa Oromiyaa keessaaf magaalaa keessatti
akka malee dabalamee jira. Dargaggoon bakkeewwaan kana ooluun
barnotaanillee akka gadi bu’u taasiisaa jira. Wanti akka malee nama
gubu guddaan dargaggeessi naanno dhaabbatootaa Oolmaa dargaggoo kanaa
oolu waa’ee Oromoo Dubbachuurraa waa’ee faranjoota kubbaa duukaa figaa
oolanio dubachuutti yeroo dabarsuu barbaada.
Barataan Mooraa barnootaa olaanaarraa eebbofamus carraan hojii
gaafa dhiphataa deemu bakkeewwan kanaaf saaxilamuu cinatti mana Jimaaf
bakkeewwaan araada hamaa ta’an deemee dabarsuutti amana.
Barnota digirii jalqabaan kanneen eebbifaman keessaattuu
kolleejjiiwwaan Saayinsii Hawwaasaa fii Saayinsii Uumaamaa carraa
kaasuun erga hafee bubbulee jira. Carraa dhiphaan turte, duratti erga
eebbifamanii booda dorgomanii pedagogy waggaa tokkoof baratanii carraa
kaasuu turte. Malli kun malaaf fala ishee dhumaa barataaf turte.
Ademsa kana keessatti maatiin barataa barnoota baratee xumuree jira
jechuu saatii maatiin harkasaa eegutti ammas barnoonni waggaa tokkoof
dabalamtiif turte. Taatus barataan Oromoo dirqamee waan kana fudhatee
socho’aa ture. Taatus dhiyeenya kana, Pedagogy erga barataniid qorumsi
dhumaa akka jalqabame barana beeksisan. Qorumsa dhunaa kana kan
baasaniif yoo pedagogy barattees qorumsa jajjabaa deebi’uu hindandenye
qoruun barataa Oromoo hoji dhabaa taadisuuf irratti dalagame. Amma
ramaddiin Barsiisota digirii Pedagogy barachuuf waraqaa raagaa
qabaachuu qabu. Waraqaa sana qabaachuuf qorumsa dhuma peda irratti
fudhatan murteessaadha. Qorumsa kanammoo eenyullee darbuu danda’aa
hinjiru. Bara kana mooraa Asoosaa Yuunibarsiititti kan barataniif
Jimmaa keessattibkanneen peedaa baratan gaafannee harki 85 ol kaneen
qorumsa kufanidha. Adeemsa kanaan waan hamaatti adeemaa jirraa jechuun
Barsiisonni marii lafa jalaa jalqabaa jiran.
« Lixa Oromiyaa Aanaa Waamaa Hagaloo Keessatti Lubbuun Namaa Anbuulaansiin Dabarte
GOCHAA FARRUMMAA »
Pingback: Barsiisotni Digirii Duraa Baratan Ammalee Carraan Dalagaa Mootummaa Argachuu Dhiphaadha Jedhuun Komii Hamaa Kaasaa Jiran – OROMIYAANWANOFITIABBAATUU EGATAA
Pingback: Barsiisotni Digirii Duraa Baratan Ammalee Carraan Dalagaa Mootummaa Argachuu Dhiphaadha Jedhuun Komii Hamaa Kaasaa Jiran – oromiyaanwanofitiabbatuegata